Ahoana ny fizarana sy fampidirana rakitra ao amin'ny Linux | Avy amin'ny Linux
Ahoana ny fomba fizarana sy fampidirana rakitra ao amin'ny Linux
Ny fizarana sy ny fampidirana rakitra ao amin'ny Linux dia asa iray somary tsotra izay ahafahantsika manaparitaka rakitra amin'ny rakitra kely kokoa, izany dia manampy antsika amin'ny fotoana maro hanasoketana ireo rakitra izay manana toerana fitadidiana be dia be, na hitaterana izany ao amin'ireo vondrona fitehirizana ivelany na ho an'ny politikam-piarovana toy ny fitazonana kopian'ny angoninay miova sy zaraina. Ho an'ity dingana tsotra ity dia hampiasa baiko roa lehibe mizara sy saka izahay.
1 Inona no atao hoe fisarahana?
2 Inona no atao hoe saka?
3 Ahoana ny fomba fizarana sy fampidirana rakitra ao amin'ny Linux amin'ny fampiasana fisarahana sy saka
Inona no atao hoe fisarahana?
Izany dia didy ho an'ny rafitra Unix izay mamela antsika hizara rakitra ho kely kokoa, mamorona andian-drakitra miaraka amin'ny fanitarana sy mifandraika amin'ny anaran'ny rakitra tany am-boalohany izy io, afaka mametaka ny haben'ny rakitra azo.
Mba hijerena ny sakany sy ny mampiavaka an'io baiko io dia azontsika atao ny manatanteraka fisarahana amin'ny olona izay ahitantsika ny antontan-taratasy amin'ny antsipiriany
Inona no atao hoe saka?
Ho azy ny baiko linux linux mamela anao concatenate sy mampiseho fisie, mora sy mahomby, izany hoe, amin'ny alàlan'ity baiko ity dia afaka jerentsika ireo rakitra an-tsoratra isan-karazany ary azontsika atao koa ny mampifangaro ireo rakitra voazara.
Toy izany koa amin'ny fisarahana dia afaka jerena ny antontan-taratasy antsipiriany momba ny saka miaraka amin'ny saka olona.
Ahoana ny fomba fizarana sy fampidirana rakitra ao amin'ny Linux amin'ny fampiasana fisarahana sy saka
Raha vantany vao fantatrao ny fototry ny baikon'ny fisarahana sy ny saka dia ho mora ny hizara sy hanatevin-daharana ireo rakitra ao amin'ny Linux. Ohatra iray amin'ny ankapobeny izay tianay hizara fizarana antsoina hoe test.7z izay milanja 500 mb ho antontan-taratasy 100mb marobe, tsy maintsy manatanteraka ity baiko manaraka ity fotsiny isika:
Ity baiko ity dia hamerina rakitra 5 misy 100 mb vokatry ny fisie original, izay hanana ny anarana divayaa, divabab sns. Tsara ny manamarika fa raha ampiana ny masontsivana -d amin'ny torolàlana teo aloha ny anaran'ny fisie azo dia isa, izany hoe, mizara01, mizara02 ...
Ankehitriny, raha te hiaraka amin'ireo rakitra izay nozarainay isika dia mila manatanteraka ity baiko manaraka ity fotsiny avy amin'ny lahatahiry izay itahirizana ireo rakitra:
Amin'ireto dingana kely nefa tsotra ireto dia azontsika atao ny mizara sy manatevin-daharana ireo rakitra ao amin'ny Linux amin'ny fomba tsotra sy mora, manantena aho fa tianao izany ary hahita anao amin'ny lahatsoratra ho avy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » GNU / Linux » Ahoana ny fomba fizarana sy fampidirana rakitra ao amin'ny Linux
Rurick Maqueo Poisot dia hoy izy:
izany koa dia mety amin'ny rakitra video? Ny tiako holazaina dia raha misy sarimihetsika zaraina ho horonantsary 2 (tohin'ny iray hafa), azoko atao ve ny manambatra azy ireo hanana horonan-tsary tokana miaraka amin'ireo atiny rehetra?
Valiny tamin'i Rurick Maqueo Poisot
tatiz dia hoy izy:
Tsia, lohahevitra hafa io !!!, tsy maintsy ataonao amin'ny mpamoaka horonantsary izany. Ity dia ampiasaina hizara fizarana horonan-tsary amin'ny faritra maro, ary avy eo manatevin-daharana azy ireo indray, saingy, ohatra, tsy ho azo atao ny milalao misaraka ny faritra rehetra amin'ilay horonan-tsary, satria tsy hanana lohateny izy ireo, ny horonan-tsary iray manontolo dia hojerena indray mandeha fotsiny midira indray. Raha tsy azonao dia manontania indray.
Mamaly an'i tatiz
Oh! Misaotra betsaka tamin'ny fanazavana
Linuxero taloha dia hoy izy:
Mitandrema amin'ny filaharan'ny saka!
Valio i Linuxero taloha
mdiaztoledo dia hoy izy:
Mihevitra aho fa tsy mandeha tsara izany, satria miankina amin'ny endrika video ampiasainao, ny rakitra dia mitondra fampahalalana momba ny faharetan'ny horonantsary ary koa zavatra hafa, koa raha mampiasa an'io fomba io ianao hanatevenana horonan-tsary roa dia azo inoana fa izay manampy ny atin'ny rakitra faharoa amin'ilay voalohany amin'ny haavon'ny angon-drakitra, fa rehefa manandrana mitendry ilay rakitra ianao dia tsy ho lalaovina misesy ireo horonantsary roa ireo, na hanome anao lesoka ao amin'ilay rakitra na ilay voalohany ihany no ho lalaovina, toy ny hoe maka horonan-tsary iray manontolo ianao faritra tsy azonao lalaovina misaraka ireo faritra roa.
Mamaly an'i mdiaztoledo
Ahoana no tokony hataoko amin'ny fametahana ireo rakitra rehetra ao anaty lahatahiry ho ao anaty rakitra tsirairay? ohatra, ao amin'ny folder1 dia misy file1 file2 sy file3 ary tiako ho azy daholo ny file1.7zip file2.7zip,
yoswaldo dia hoy izy:
Izy io dia miasa amin'ny sary.iso?
Mamaly an'i yoswaldo
Amin'ity dingana ity dia mety hisy ny kolikoly kely ary hanimba ny fisie?
Fred dia hoy izy:
Rehefa manandrana mizara fisarahana amin'ny fisarahana aho dia milaza amiko ny lesoka fidirana / fivoahana
Inona no azoko atao hamahana azy? 🙁
Valiny tamin'i Fred
Inona no hatao aorian'ny fametrahana Deepin 15.4
Rally Dirt: ny lalao hazakazaka Linux izay no fahatezerana rehetra